पुनर्निर्माणबाट पन्छिँदै दाता : भारतले कबुल गरेको ७५ अर्ब किन दिएन ? | Diyopost - ओझेलको खबर पुनर्निर्माणबाट पन्छिँदै दाता : भारतले कबुल गरेको ७५ अर्ब किन दिएन ? | Diyopost - ओझेलको खबर
कला साहित्य प्रचण्ड प्रेस काउन्सिल माधव नेपाल
पुनर्निर्माणबाट पन्छिँदै दाता : भारतले कबुल गरेको ७५ अर्ब किन दिएन ?
Diyo post शनिबार, कार्तिक १०, २०७५ | ७:२९:०८
काठमाडौं, कार्तिक १० । भूकम्पमा भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने भनेको ७५ अर्ब रुपैयाँ नआउने भएको छ। भारतले पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब अनुदान र एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋणमा ७५ अर्ब घोषणा गरेको थियो।
भूकम्पलगत्तै सरकारले आयोजना गरेको ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ दाता सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले १ खर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेकी थिइन्। उनले पाँच वर्षभित्र सबै रकम उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएकी थिइन्। त्योमध्ये अहिलेसम्म भारतले २ प्रतिशत रकम मात्रै दिएको छ।
उसले अर्थ मन्त्रालयमार्फत २०७५ साउन ११ मा २ अर्ब १० करोड ४३ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ। सम्मेलनका बेला विदेशमन्त्री स्वराजले घोषणा गरेकोबाहेक भारतले दिने नियमित सहयोग पनि कायम रहने बताएकी थिइन्। तर सहयोग घोषणामै सीमित बनेको छ।
एक्जिम बैंकमार्फत दिने भनिएको ७५ अर्ब रकम नआउने भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० सुशील ज्ञवालीले पुष्टि गरे। ‘एक्जिम बैंकको ७५ अर्ब नआउने भयो, भारतले दिने अनुदानको रकम पनि ढिलो गरी आउँदै छ’, उनले भने।
यद्यपि एक्जिम बैंकले दिने भनेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्ने र उक्त रकम शोधभर्नामार्फत पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने प्रयास पनि भइरहेको ज्ञवालीले बताए। भारतको सर्तका कारण एक्जिम बैंकको रकम प्रयोग गर्न नसकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा। चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘भारतकै डिजाइनमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने एक्जिम बैंकको प्रावधान छ, त्यसअनुसार यहाँ पुनर्निर्माणको काम हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यसैले एक्जिम बैंकको रकम प्रयोग हुन नसकेको हो।’
दाताले घोषणा गरेको ४० प्रतिशत रकम पनि नआएको अवस्थामा सरकार फेरि दाता सम्मेलन गर्न तम्सिएको छ। सम्मेलनमार्फत दाताले गरेको घोषणा र सम्झौताको समीक्षा गर्दै थप सहयोग लागि आग्रह गरिने सरकार सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ।
भूकम्पको दुई महिनापछि २०७२ असारमा ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ ९दाता सम्मेलन० भयो। भारत, चीनदेखि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले सम्मेलनमा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरे। तर दातासँग अहिलेसम्म २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको मात्र सम्झौता भएको छ।
भारतले दिने भनेको एक खर्बमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ नदिने टुंगो लागेपछि दाताबाट पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउने भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि विदेशी सहयोगको आवश्यकता पहिचान गरिरहेको प्राधिकरणका उपसचिव दिव्यराज पोखरेलले बताए। गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए०, आईएनजीओलगायत विदेशी दातासँग छिट्टै सम्मेलन गर्ने तयारी भइसकेको उनले जानकारी दिए।
दाता सम्मेलनपछि अपेक्षाकृत सहयोग नआए पनि अरू विकल्प नरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा। श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘डोनरको बिटर अनुभव छ। तर पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी चाहिएकाले माग्नुको विकल्प पनि छैन’, उनले भने।
कतिपय दाताले दिए जस्तो देखाउन घोषणा गर्ने गरेको र अन्ततः नदिने गरेको उनले बताए। ‘केही संस्था यस्ता छन्, जोसँग पैसा नै हुँदैन, दिए जस्तो गर्न उनीहरू बोलिदिन्छन्’, उनले भने, ‘कतिपय दाताले भने हामीले पूरा गर्नै नसक्ने सर्त राख्छन्।’
पुनर्निर्माणका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब रकम लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो। दातासँग भएको सम्झौतासमेत गरी पुनर्निर्माणका लागि अझै ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले जानकारी दिए। शनिबारको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
शनिबार, कार्तिक १०, २०७५ | ७:२९:०८
…जब दिपक मनाङेले सडकमा बेहोस् युवतीलाई मन्त्रीको…
केपी ओलीको नाममा करिश्मा मानन्धरको झूटको पर्दाफास…
फिलिङ्गोमाथि समिक्षा : जिवन्त पुस्तकभित्र सिमान्तीको दोहोरो…
नेपाली लेखनमा म अलि पछि तानिएको हुँ
काठमाडौं महानगरको साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा नबिल…
…जब दिपक मनाङेले सडकमा बेहोस् युवतीलाई मन्त्रीको गाडीमा राखेर अस्पताल पठाए ! (भिडियोसहित)
केपी ओलीको नाममा करिश्मा मानन्धरको झूटको पर्दाफास : पोल खुलेपछि स्ट्याटस नै डिलिट !
फिलिङ्गोमाथि समिक्षा : जिवन्त पुस्तकभित्र सिमान्तीको दोहोरो भूमिका !
केपी ओलीको नाममा करिश्मा मानन्धरको झूटको पर्दाफास : पोल खुलेपछि…
काठमाडौं महानगरको साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा नबिल बैंकको रजाइँ :…
कांग्रेस सभापतिका उम्मेदवार निधि विवादमा : ‘ठगीका अभियुक्त’सँग करोडौँ लिएको…